दिल्लीको बाटोमा काठमाडौँ : अस्पतालमा बेड छैन, तर 'हामी' चेत्ने हैन ! Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
दिल्लीको बाटोमा काठमाडौँ : अस्पतालमा बेड छैन, तर 'हामी' चेत्ने हैन !
सरकारी अस्पतालका बेडहरू सङ्क्रमितबाट भरिइसके। सामान्य मात्रै हैनन्, आइसियु र भेन्टिलेटर समेत भरिइसकेका छन्। पाटन , वीर, टेकु, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना कतैका अस्पतालले पनि अब थप सङ्क्रमित थेग्न सक्ने अवस्था छैन।
काठमाडौँ:कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका हरेक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेका छन्। आइतबार सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीन हजार नाघिसक्यो। दैनिक मृतकको सङ्ख्या २५ नाघिसक्यो।
तर सार्वजनिक स्थानमा देखिने दृश्यले नेपालमा अझै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ र झैँ गराउँछ। सडकमा उस्तै भिडभाड। जात्रा पर्व चलेकै छन्। प्रधानमन्त्री दैनिक भेला गरेरै बसेका छन्।
सार्वजनिक यातायात होस् या निजी र सरकारी कार्यालय न सामाजिक दुरी कायम भएको देखिन्छ, न त राम्रोसँग मास्क नै लगाएको देखिन्छ।
अब अस्पतालको अवस्था बुझौँ
अधिकांश सरकारी अस्पतालका बेडहरू सङ्क्रमितबाट भरिइसके। सामान्य बेड मात्रै हैनन्, गम्भीर लक्षण देखिएका सङ्क्रमितको उपचार गर्नुपर्ने आइसियु र भेन्टिलेटर समेत भरिइसकेका छन् अधिकांश अस्पतालका।
पाटन अस्पताल, वीर, टेकु, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना कतैका अस्पतालले पनि अब थप सङ्क्रमित थेग्न सक्ने अवस्था छैन।
अस्पतालको यो अवस्था अनि सार्वजनिक स्थान र कार्यालयको चहलपहल हेर्दा प्रस्टै देखिन्छ हामी भारतको दिल्लीझैँ बनाउन कस्सिएका छौँ हरेक दिन।
उपत्यकाका अस्पताल भन्छ‘अब अरू सङ्क्रमित धान्न गाह्रो छ’
कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो लहरको बेलामा प्रशंसनीय काम गरेको पाटन अस्पतालका निर्देशक रवि शाक्यका अनुसार सङ्क्रमितको चापले केही दिनअघि नै आइसियु र भेन्टिलेटरमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई पाटनमा नपठाउन अन्य अस्पताललाई आग्रह गरिएको बताउँछन्।
‘सकभर बिरामी नफर्काउन् भन्ने हाम्रो नीति हो,’ निर्देशक डा. शाक्यले भने,‘अस्ति चाहिँ आइसियु र एचडियु भरि भएको बेलामा दायाँबायाँका सबै अस्पताललाई खबर गरेर आइसियु भर्ना गर्नुपर्ने बिरामी नपठाउन अनुरोध नै गर्‍यौ।’
उनका अनुसार कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि छुट्टाइएका २१ वटा बेड मध्ये आइतबार बिहान १४ जना बिरामी आइसियुमै छन्। कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि छुट्टाइएको १७ वटा भेन्टिलेटरमध्ये आइतबार ७ वटामा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचार भइरहेको छ।
‘हिजोसम्म भेन्टिलेटर फुल भएर १८ जनासम्म बिरामी पुगेका थिए,’ उनले भने‘ आइतबार आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामी कम भए। तर नयाँ सङ्क्रमितको बढ्दो सङ्ख्याले ती बेडहरू धेरै दिन रित्तो बस्न पाउँदैनन्।
पाटन अस्पतालमा १ सय ३२ जना कोरोना सङ्क्रमित भर्ना छन् अहिले नै। भर्ना भएकामध्ये १९ जना बालबालिका छन्।
अस्पतालले कोभिडका लागि २ सय १० बेड सङ्क्रमितको उपचारका लागि छुट्टाइएको छ। बढ्दो सङ्ख्याले बेडको सङ्ख्या बढाउने चापमा छ अस्पताल प्रशासन।
‘आवश्यकता हुँदै गयो भने अझै बढाउँछौँ। तर धेरै सक्दैनौ,’ उनले भने
उनका अनुसार पाटनमा प्रतिदिन २ सय जना पिसिआर गर्न आउँछन्। तीमध्ये ५० प्रतिशतमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको शाक्यले जानकारी दिए।
टेकुको सबै आइसियु भरियो
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २० वटा आइसियु बेड मध्ये कुनै खाली नभएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले जानकारी दिए।
अस्पतालमा ११ वटा भेन्टिलेटरमध्ये सबैमा बिरामी छन्। कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि ५४ वटा बेड छुट्टाइएकोमा सबैमा सङ्क्रमित भर्ना भइसकेका छन्।
‘फोन आइरहेका छन्। बिरामी लिन नसक्ने भएकाले फोनबाटै अन्य अस्पताल जान भनिरहेको छु,’ उनले भने‘ तर बिरामीका आफन्तले बेड खाली छ कि भनेर फोन गरिरहन्छन्। छैन भन्न बाध्य छौँ।’
सशस्त्रको अवस्था नि उस्तै
सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताल बनाएको सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा कोरोनाको उपचारका लागि २० वटा आइसियु बेड छुट्टाइएको छ।
अहिले १८ जना सङ्क्रमित आइसियुमा उपचाररत रहेको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक डा. प्रवीण नेपालले जानकारी दिए। कोरोना सङ्क्रमितका लागि छुट्याइएका ८ वटै भेन्टिलेटर भरिएको छ।
अस्पतालका अनुसार कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि आइसियु सहित १ सय ४० वटा बेड छुट्टाइएको छ। जसमध्ये १ सय २५ वटा बेडमा सङ्क्रमित छन्।
अस्पतालमा आएका सङ्क्रमितलाई नफर्काए पनि थपलाई भर्ना लिन सक्ने अवस्था नभएको नेपालले जानकारी दिए।
डा. नेपालले भने,‘बेड छैन। अन्तै खोज्नुहोस् भन्नु परेको छ।’
उनले सङ्क्रमितहरूको बढ्दो सङ्ख्या देखेर आइतबार ४० बेड थप गरिएको जानकारी दिए। तर ती पनि कति समय रित्तो रहला र ।
छाउनीमा रहेको वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा आइसियु र आइसोलेसनमा गरी ३२ जना सङ्क्रमित भर्ना भएका छन्।
सो अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर सहित ७५ बेड छुट्टाइएको छ सङ्क्रमितको उपचारका लागि। तीमध्ये २० वटा आइसियु ५० जनरल (आइसोलेसन) अनि ५ बेड कोभिड सर्जरीका लागि छुट्टाइएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलले जानकारी दिए।
कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि ८ वटा भेन्टिलेटर छ। धन्न, त्यहाँको भेन्टिलेटर भने भरिएको रहेनछ आइतबारसम्म।
१ सय १४ बेड रहेको नेपाल प्रहरी अस्पतालमा ६९ वटा बेडमा कोरोना सङ्क्रमित छन्।
कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेकाले बढेको क्षमता बढाएर ३ सय पूर्याउन लागेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिए। अस्पतालमा रहेका सङ्क्रमित प्रहरी मात्रै हुन्। सर्वसाधारण छैनन्।
प्रवक्ता कुँवरले भने,‘बाहिरकालाई दिएका छैनौँ। हाम्रो मात्रै सङ्क्रमित छन्।’
भरिभराउ छ शिक्षण अस्पताल
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ)मा थप कोरोना सङ्क्रमितलाई लिन सक्ने अवस्था छैन।
कोरोना सङ्क्रमितको लागि छुट्टाइएका बेड खाली छैनन् त्यहाँ। कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि छुट्ट्याइएका १२ वटा आइसियु बेड भरिभराउ भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी राम विक्रम अधिकारीले बताए। उनले भने,‘आइसियु र भेन्टिलेटर प्याक छन्।’
कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि एक सय बेड मिलाइएको उनले बताए। आइतबार अस्पतालमा ५५ वटा बेडमा सङ्क्रमित रहेको उनले जानकारी दिए।
अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमितलाई फर्काउनु नपरे पनि यसरी नै सङ्ख्या बढ्ने हो भने धान्न नसकिने उनी बताउँछन्।
‘सामान्य किसिमका बिरामीलाई घर पठाएर बेड कोरोना सङ्क्रमितका लागि बेड खालि गराइरहेका छौँ,’ अधिकारीले भने‘ बेड सङ्ख्या थप्न सकिए पनि आइसियु र भेन्टिलेटर विस्तार गर्न भने कठिन हुन्छ।’
वीरका सबै आइसियुमा सङ्क्रमित
वीर अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि छुट्टाइएको १० वटै आइसियु बेड भरिएको छ। आइतबार अस्पतालमा ४० जना कोरोना सङ्क्रमित बिरामी रहेको अस्पतालका कोभिड–१९ फोकल पर्सन डा अच्युत कार्कीले जानकारी दिए। उनले भने,‘कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि जम्मा ७६ वटा बेड छुट्टाइएको छ।’
उता कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचारका लागि भक्तपुर अस्पतालमा छुट्टाइएको ६ वटा आइसियु बेडमध्ये आइतबार ३ वटा भरिएको छ।
अस्पतालका अनुसार ६ वटा भेन्टिलेटरमध्ये आइतबार बेलुकासम्म १ जना पनि भेन्टिलेटरमा छैनन्। आइतबार २ जनालाई भेन्टिलेटरबाट निकालेपछि खालि भएको हो।
कोरोनाको उपचारका लागि छुट्टाइएको ३३ बेडमध्ये २३ वटा बेड एकै दिन भरिएको अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुमित्रा गौतमले बताइन्। उनले भनिन्,‘हिजो ६ जना बिरामी थिए। आज २३ जना पुगे।’
त्यसै गरी २५ वटा एचडियु (हाइ केयर युनिट) भएकाले जनशक्ति तयार भएपछि चलाउने अस्पतालले जनाएको छ। उनले भनिन्,‘प्रदेश सरकारले म्यानपावर पठाउने निर्णय गरेको छ।’ अहिलेसम्म बेडै नपाएर अस्पतालबाट बिरामी फर्काउनु भने नपरेको उनले सुनाइन्।
कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा रहेका १ सय २५ आइसोलेसन बेडमध्ये आइतबार बिहानसम्म करिब ५७ जना कोरोना सङ्क्रमित आइसोलेसनमा रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
आइसोलेसनमा पुग्नेको सङ्ख्या केही दिनमा नै ह्वात्तै बढेको केन्द्रका कोभिड फोकल पर्सन डा. जितेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
‘अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीलाई सकेसम्म भर्ना लिएका छैनौँ,’ उनले भने।
सङ्क्रमितको बढ्दो सङ्ख्या देखेर अस्पतालमा २ सय बेड बनाउने योजना रहेको उनले सुनाए।
हजार आइसियु ४ सय ७८ भेन्टिलेटर
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १ हजार १ सय ६९ वटा आइसियु बेड छन्। जसमध्ये आइतबार २ सय ५२ जना सङ्क्रमित आइसियुमा उपचाररत छन्।
४ सय ७८ वटा भेन्टिलेटरमध्ये ६५ वटा भेन्टिलेटर कोरोना सङ्क्रमितले भरिइसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामै ८२ जना आइसियु र ४० जना सङ्क्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।
यो पटक अली चाँडै सिकिस्त
चिकित्सकका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरमा सबै उमेर समूहका व्यक्ति प्रभावित भएका छन्। पहिलाको भन्दा लक्षण पनि केही फरक देखिएको उनीहरू बताउँछन्।
वीर अस्पतालमा पाका उमेरका सङ्क्रमित व्यक्ति छन्। पहिलेको भन्दा ज्वरो धेरै दिन (७÷८ दिन) आउने (उच्च ज्वरो), पहिलेको भन्दा बढी टाउको दुख्ने, शरीर गल्ने र कतिपयको छालामा छुँदा पनि दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएको वीर अस्पतालका कोभिड–१९ फोकल पर्सन डा. कार्की बताउँछन्।
टेकु अस्पतालका प्रवक्ता डा. बास्तोलाका अनुसार लक्षण पहिलेको जस्तै धेरै खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने जस्ता जटिलता देखिएको छ।
उनले भने,‘कम उमेरकालाई पनि जटिलता देखिन्छ।’
अहिले भर्ना भएको बिरामी सिकिस्त रहेको उनी बताउँछन्। अहिलेका सङ्क्रमित पहिलेको भन्दा चाँडै सिकिस्त भएको उनको अनुभव छ।
सङ्क्रमितहरू ढिलो अस्पताल पुग्दा पहिलेको भन्दा मृत्युदर बढेको पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. शाक्यले बताए।
‘पहिले मान्छे कोरोना बिरामी र पोजेटिभ हुनसाथ अस्पताल पुग्थे। अहिले गम्भिर भइसकेपछि मात्र आउन थालेका छन्,’ पाटनका निर्देशक शाक्यले भने‘ निमोनिया लगायत स्वास्थ्य अवस्था खराब भइसकेपछि अस्पताल आउँदा कोरोना सङ्क्रमितलाई बचाउन कठिन हुन्छ।’
भक्तपुर अस्पतालमा गत वर्षको कोरोनाको भन्दा ७० गुणा बढेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौतम बताउँछिन्। परीक्षण गरेकामध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण (पोजेटिभ) देखिएको डा. गौतमले जानकारी दिइन्।
डा. गौतम पनि बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था चाँडै जटिल हुने गरेको बताउँछन्। एक जना सङ्क्रमितको अवस्था सुनाइन्,‘दुई दिन अगाडी एक्स-रे हेर्दा केही थिएन। आज हेर्दा पुरै छाती बिग्रिएछ।’
आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका डा. श्रेष्ठ अहिलेका सङ्क्रमितहरूमा झाडापखाला बढी देखिएको ,सास फेर्न कठिन हुने समस्या देखिएको बताए।
२०७८ वैशाख १३ गते ०:२० मा प्रकाशित